Ogaden News Agency (ONA) – Duqayn Lala Beegsaday Xaflad Aroos Dalka Yemen.
Duqayn Lala Beegsaday Xaflad Aroos Dalka Yemen.
Posted by ONA Admin	/ April 24, 2018
Masuuliinta caafimaadka Yemen ayaa sheegay in weerar dhinaca cirka ah oo ay fuliyeen isbaheysiga uu Sacuudigu horkacayo lala beegsaday xaflad aroos oo ka socotay waqooyiga dalka Yemen, halkaasina ay ku dhinteen 20 qof.
Khalid Al-Nadhri, oo ah sarkaal sare oo dhinaca caafimadka ah ee Gobolka Xajka ee waqooyiga ku yaala, ayaa wakaaladda wararaka AP u sheegay in inta badan dadka dhintay ay ahaayeen haween iyo caruur isugu soo ururay mid ka mid ah teendhooyinka loogu tala galay xaflada arooska ee ka dhaceysay Dagmada Bani Qayis. Waxa uu sheegay in aroosadii ay kamid aheyd dadkii halkaa ku dhintay.
Madaxa Isbitaalka Aljomhuuri ee deegaankaasi ku yaalla Mohammed al-Slamali ayaa sheegay in caruuskii iyo 45 ruux oo kale oo dhaawac ah la gaarsiiyay Isbitaalka.. Mas’uuliyiinta ayaa sheegay in 30 kamid ah dhaawaca ay carruur yihiin, qaarkoodna ay xaaladdoodu aad u daran tahay kuwaasoo qeybo xubnohooda kamid ahi ay googo’een.
Waa weerarkii 3aad oo dhinaca cirka ah oo ay dad badan oo rayid ahi ku waxyeelloobbeen oo saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay ka dhaca dalka Yemen.